Esikhathini ikhabethe zonke intombazane yesimanje ngempela kuyoba imibala nezitayela izingubo ukuhluka. Akumangazi, ngoba kubhekwa yezinto ekhululekile kakhulu futhi njengabesifazane izingubo labesifazane. Kodwa ngisho into imfashini kakhulu kudinga imihlobiso ezengeziwe. Ngakho-ke, bafowethu eningi eyenza unakekele ngokubukeka kwabo, bakhathazekile mayelana nendlela thatha izesekeli kuya black ingubo.
Okokuqala, kufanele kuphawulwe ukuthi isibalo imibala ukuthi avunyelwe okuhlangana ngayo abamnyama, akugcini. Ngakho-ke, cishe zonke izinto elondolozwe ku jewelry ibhokisi yabesifazane ingasetshenziswa njengendlela izesekeli izingubo ezimnyama. Kodwa ukuze ubukeke stylish, akufanele sidebeselele imithetho embalwa aphansi.
Ngokwemibiko ye-etiquette engabhaliwe imfashini, ke akuvunyelwe kanyekanye ukuba baphathe imihlobiso ezingaphezu kwezintathu. Kulabo musa ukugqoka namacici, ungakwazi ukugqoka elengayo, isongo futhi indandatho. Lezi sekeli black ingubo, isithombe okuyinto kungabonwa emakhasini omagazini abaningi imfashini, abe umphelelisi ephelele hhayi kuphela kusihlwa, kodwa futhi isithombe kwansuku zonke. Ezimweni ezithile futhi ngaso sonke kungenziwa kuphela eyodwa umhlobiso, ikakhulukazi uma sibona umgexo omkhulu noma ubuhlalu elikhanyayo. Abesifazane abaningi ngokuvamile wagqoka okusuke ekhethekile black ingubo. Yini izesekeli Site Ezimweni ezinjalo, kungenzeka ukubheka isibonelo abanye osaziwayo. Ngokuvamile, i-choice ubucwebe kufanele kubhekwe isizathu okuyinto edala ngendlela ehlukile.
Ukuya isenzakalo esibaluleke ngokukhethekile, kubalulekile ukukhetha izesekeli ilungelo black ingubo, ngokwesiko elihlobene ne ngendlela enesizotha. Ezimweni ezinjalo, umhlabeleli fit string zakudala amapharele zemvelo, kulekelelwa ezifana namacici, noma imikhiqizo eyenziwe oluluhlaza, ne-agathe ne-rock crystal. Ukunikeza umfanekiso nenhle ngaphezulu, ungakwazi anezele ngayo ibhroshi enkulu. Nokho, usacabanga isitayela zemikhosi, akufanele sikhohlwe ukuthi izesekeli ngokweqile black ingubo nje konakalisa umbono. Ngakho-ke, ukuze iphenduke ezazilengisiwe sathi ne tinsel shiny isihlahla sikaKhisimusi, kufanele nigcine ngokulinganisela.
Isimanga siwukuthi kodwa abakhethiwe kahle imihlobiso kuya ingubo kancane black kungaba zisishintshe ngokuphelele isimo isitayela zokusebenza. Ukuze silondoloze Umqondo oyisisekelo ngubo abakhethiwe, ungasebenzisa esikhwameni ezifanele, wenza kwezamabhizinisi isitayela, noma izinga iphothifoliyo okuqotho. Ukwakha i isitayela ehhovisi , ungasebenzisa lezi izesekeli ingubo emnyama njengoba indandatho ehlotshiswe amatshe lulwimi eziyigugu noma eziyigugu, oqaphelayo namacici nesizotha izintokazi zikanokusho ukubukela. Lokhu ngubo ihlinzeka yesimanje ozinikezele Maningi amathuba ukuze uzizamele amathoni futhi semitones. Aye emsebenzini, kungcono ukuyeka wonke adornments entanyeni, esikhundleni isikhafu wazo wangempela noma iduku. Ungakhohlwa ukuthi isitayela ehhovisi kuyafaneleka, hhayi ezingaphezu kwezintathu izesekeli kuhlanganise indandatho yomshado. Asikho isidingo ukugqoka umsebenzi plastic, lesikhumba noma ubucwebe lokhuni. wochwepheshe Oholela ukuncoma aphelele ehhovisi black ingubo zensimbi imihlobiso, obunamaparele ngamatshe yemvelo.
Ukuze kwansuku ukugqoka efanelekayo yimuphi izingubo ezimnyama. Kuye esikuthandayo , zingaba amathuluzi eside, okufutshane, eduze kufaneleka noma okuxekethile-efanelekayo. Kulokhu, kugcizelelwa induduzo bafake. Ukukhetha izesekeli ingubo emnyama (isithombe esihlokweni), ungakwazi ukugxila kuphela kumuzwa wakho siqu, ungakhohlwa mayelana nokufaneleka nokulinganisela. Ngokwesibonelo, ukulungiselela umhlangano nabangani, ungakwazi ukugqoka jewelry yasekuqaleni elikhanyayo. The umphelelisi ephelele kuze kwalokho, eklanyelwe in isitayela kwansuku iba ibhantshi elikhanyayo, a Cardigan wathungela noma elifushane jacket kancane lesikhumba. Ngaphezu kwalokho, ingubo black evamile kungenziwa igqoke nge Bolero ku Ensemble kwanoma iyiphi luhlaza elikhanyayo. Okwakhe ikhithi kwansuku Ungengeza enhle Ngokuphambene ibhande.
Uma uya ukuhamba ngosuku ne othandekayo ingubo emnyama, udinga azinake ukukhethwa ubucwebe. Uma kungenjalo, kungenzeka udangele kakhulu, noma, kunalokho, umfanekiso tacky, owenza ungakuvumeli ukuba romance. Iningi wochwepheshe ehola ukuncoma le njongo ukuba makudle imihlobiso ongaphakeme-key nesizotha eyenziwe rock crystal, rose asebenza ngebhethri, oluluhlaza namanye amatshe elikhanyayo. Le mikhiqizo ngeke nje ukunikeza isithombe umsungulo omkhulu futhi uthando, kodwa uvuselele ukubonakala.
Abathandi isitayela ngokucace nakakhulu kungenziwa Kunconywa izesekeli oluluhlaza. The Ensemble okwesibhakabhaka black ukunikeza isithombe romantic obugagu, kuhlangene ngesizotha.
Hlunga ekusukeni ngoba amanzi "Aquaphor Universal". Izihlungi izimo mkhakha ngezandla zabo
Indlela yokwenza rocket out likamentshisi futhi ucwecwe? Simple futhi kumnandi!
Uyini yokubala abantu? Indlela ekuwufezeni?
Indawo egcina amagugu esizwe yezindaba zemihla Yaroslavl - yiholidi uya khona izakhamuzi nezivakashi